Liverpool way ogtahay halka ay ka jilicsan tahay
Waxaa macquul ah in la yiraahdo Manchester United kuma aysan fiicneyn sameynta saxiixyo guulo leh sanadihii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga, waxayna ku guuldareysatay inay kooxda la qabsato ciyaartoy fantastik ah oo tan iyo markii ay ka tageen.
Laakiin waxaa jira ciyaartoy aan waligood su’aal laga weydiinin saxiixiisa: Bruno Fernandes oo kooxda aad ula dhacay ayaa muujiyay inuu u qalmo million 47 milyan oo ay ka helaan Sporting Lisbon iyo in ka badan. socda iyada oo ku xidhan bandhigiisa.
Tan iyo imaanshihiisii, Portugal waxay ahayd kooxdii iyo hogaamiye isku dhafan oo saameyn ku yeeshay ciyaartoydii kooxda.
Wuxuu sameeyay 14 caawinaad ah Premier League tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore wuxuuna dhaafay dhamaan ciyaartoyda kale ee horyaalka ee aan awoodin.
Manchester United ayaa badisay 11 kulan halka ay barbaro gashay labo ka mid ah 13kii kulan ee uu ciyaaray Bruno Fernande, taasoo muujineysa in qaab ciyaareedkiisa uu aad ugu tiirsan yahay kooxda.
26 jirkaan ayaa 19 gool u dhaliyay United Premier League, inkasta oo sagaal ka mid ah ay ahaayeen gooldhaliyeyaal, hadana wuxuu leeyahay gacanta sare.
Markay United timaado Anfield maalinta Axada, Liverpool waa inay fiiro gaar ah siisaa ciyaaryahanka si ay u kasbadaan seddexda dhibcood oo ay markale hogaanka u qabtaan.
Sababta ay tahay inay Reds isha ugu hayso ciyaaryahanka ayaa ah in boqolkiiba 31 hal-abuurka iyo yoolalka kooxdiisu ay isaga ku tiirsan yihiin, isaguna uu dhaliyey ama caawiyey goolal, marka loo eego Anthony Martial qudhiisa. Kaliya 9 boqolkiiba ayaa ku lug lahaa.
Liverpool Echo ayaa ku warameysa in go’doominta Bruno Fernande ay ka caawin doonto inay garaacaan Manchester United, laakiin su’aashu waxay tahay sidee ay u go’doomin karaan Bruno.
Ciyaaryahanka sameeya kan ugu fiican kubbadaha Fernande waa Marcus Rashford. Afar ka mid ah toddobada caawin ee Bruno ee Premier League waxaa sameeyay Rashford, oo uu ugu dambeeyay Wolves.
Seddex ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeysay, Bruno Fernandes wuxuu siiyay Rashford baasas ka badan inta ciyaaryahan kale, waligiisna wuxuu ahaa darawal aan soo laaban.
Si loo wiiqo Liverpool, Manchester United waa inay yareysaa farqiga u dhexeeya Fernandes iyo Rashford, taasoo iyadana ka caawin doonta inay guuleystaan.
Laakiin waxaa jira su’aal kale oo halkan ku saabsan sida Liverpool ay awood ugu yeelan karto inay ka celiso Fernandes inuu baasaska dhaafo maxaa yeelay wuxuu la ciyaari karaa kooxda inteeda kale haddii aysan helin Rashford.
Xulashada kale ee Liverpool ayaa ah inay cadaadis saarto Manchester United dhanka garoonka, si ay ugu qasbaan ciyaaryahanka inuu raaco kubada oo uu ka caawiyo daaficiisa.
Habkaas, Liverpool ayaa joojin karta Bruno Fernandes, kaasoo, haddii ay sidaas sameeyaan, ay u badan tahay inuu guuleysto oo uu ku soo laabto hoggaanka Premier League.
after a anxious election marketing campaign
US airstrike kills activist, destroys Al-Shabaab